Fanadihadiana CEO an'ny Nike | Avy amin'ny mac aho
Resadresaka nifanaovana tamin'i Mark Parker, CEO an'ny Nike
Ny tambajotra amerikana CNBC dia nahazo tafatafa faran'izay betsaka Lehiben'ny Nike, Mark Parker ary nanambara antsipirihany sasany momba ny fiaraha-miombon'antoka amin'i Apple izy ary inona no dikan'ity fifandraisana tsara amin'ny lehilahy Cupertino ho an'ny orinasany ity. Vao tsy ela akory izay, Nike dia nanana ny Nike FuelBand tao amin'ny magazay an-tserasera sy tao amin'ny magazay Apple, saingy tamin'ny fahatongavan'i Apple Watch dia nodimandry niaraka tamin'ny bracelet hafa miisa hafa toy ny jawbone Up, sns ... Dingana iray izay toa miharihary Tamin'ny fotoana nanombohan'ny Apple ny akanjo azo anaovana azy.
Amin'izao fotoana izao Nike dia misy eo amin'ny Apple miaraka amina rindrambaiko amin'ny endrika fampiharana, ny Nike + izay mifanentana tanteraka ihany koa amin'ilay famantaranandro Apple vaovao. Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny tamba-jotra tamin'ny fahitalavitra dia nanambara ny Tale jeneralin'ny Nike miasa amin'ny rindrambaiko vaovao hafa miaraka amin'ireo Apple developer ary mazava ho azy fa mifandraika amin'ny fahasalamana.
Amin'izao fotoana izao dia miharihary fa taorian'ny nandraisan'ny Apple mpiasa marobe Nike izay notanterahina nanomboka ny taona 2013, dia miteraka asa mafy amin'ny rindranasa na rindrambaiko vaovao ho an'ny famantaranandron'ny paoma ity., Saingy tsy nisy ny fanamafisana ofisialy ary ankehitriny izany dia. Ny zavatra mahaliana amin'ity vaovao ity dia ny fifandraisana misy eo amin'ireo orinasa roa ireo sy ny fifandraisana mivantana eo amin'ny CEO dia tena tsara ary ity fifandraisana tsara ity dia azo antoka fa hanana fiatraikany mivantana tena mahaliana amin'ny famantaranandro Apple sy mpampiasa fohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Resadresaka nifanaovana tamin'i Mark Parker, CEO an'ny Nike
Inona no hatao raha tsy mifoha amin'ny torimaso ny Mac-nao
Ankafizo ny CarPlay ao anaty fiara tadiavinao